Vateveri vePercussion vanogadzira yakavhurwa sosi chirongwa | Linux Vakapindwa muropa
Pakapararira denda reCovid-19 kumanikidza kuzivisa kugara kwevanhu voga munenge muvanhu vese, zvese zvinoratidzwa nekuvapo kweruzhinji zvaifanira kumiswa. UyeIzvi hazvingosanganisiri kudzokororwa kwevakakurumbira maartist asiwo mamwe marudzi ayo, pasina kuve nemhedzisiro imwechete, zvakare ane vateereri vavo. Ndiri kutaura nezvemakwikwi ebhendi ekufora.
Asi, sekutaura kwaambuya vedu, Mwari anovhara mukova kwauri nekukuvhurira subreddit.
Boka revadikani vekuridza vachikurukura pasocial network iyi, vakafunga kuungana pamwe chete kuti varambe vachitamba. Uye, zvakanyanya kukosha, govana zviwanikwa zvako uye zvemukati pasi pemarezinesi akavhurika.
Aya ndiwo mabudiro akaita iyo Open Resource Drum uye Bugle Corps (OSDBC). sangano rakavakwa pasi pemitemo yekusununguka, kubatana uye kuiswa.
1 Chirongwa chevateveri vekupopota
1.1 Maitiro anoitwa sei
1.2 Nhengo dzechirongwa
Chirongwa chevateveri vekupopota
Yakatangwa muna Kubvumbi 2020, chirongwa ichi chakabva chaunganidza vanhu zana paDiscord uye parizvino inodarika mazana mana anoshingairira enhengo dzendarira nengoma. Ivo vatoita mitezo miviri chaiyo uye pachave neyechitatu munguva pfupi.
Inofungidzirwa kuti chikamu chimwe muzvishanu chenhengo dzakapinda muchirongwa chimwe nechimwe chezvitatu zvekutanga.
Zvese zvemukati zvinoburitswa nenhengo dzeOSDBC, kusanganisira magwara, zvinyorwa, zvibodzwa, mabhatani, uye mashandiro chaiwo, anowanikwa pasi pemarezinesi eCreative Commons. kuitira kuti vagone kushandiswa nemamwe mapoka akafanana.
Maitiro anoitwa sei
Tichifunga kuti kupararira kwedunhu nenzvimbo zvinoita kuti nhengo dzisangane, uyeDambudziko rekutanga ravaifanira kugadzirisa nderekuti vaitamba sei pamwe chete. Vakasarudza nzira inotevera:
Iyo repertoire inosarudzwa nevhoti Iyo inogona kuumbwa nechero yeruzhinji dhata chidimbu chemimhanzi kana chepakutanga chimiro nenhengo. Pane ino yekupedzisira kesi, Iye akasarudzwa anogovera mamakisi, tinya mateki uye matipi ekuita chidimbu, uye maodhiyo nemavhidhiyo edhita vanogovana mirayiridzo yekutumira maitiro ekurekodha uye kuratidza mavhidhiyo ekuiswa muprojekti
Kana nguva yekuendesa yapfuura uye zvese zvaitika zvaunganidzwa, dhizaini dhizaini inotanga kusanganisa yega mavhidhiyo kuburitsa inoenderana ensemble performance.
Iri ibasa rakaomarara rinoda ruzivo rwakadzama saka rwunopihwa vatungamiriri vechikamu vakasiyana (hwamanda, bass ndarira, kuridza, nezvimwewo).
Kunyangwe chirongwa ichi chichikurudzira kushandiswa kwemidziyo yakavhurika sosi, yekugadzirisa havana chishoro chekushandisa idzo idzo vapepeti vanoziva kana kuwana.
Haasi ese mitezo yeboka iri inyanzvi yevaimbi; kunewo vanyori, mainjiniya enjiniya uye vadzidzi vechikoro chepamusoro uye veyunivhesiti kuwedzera kune vamwe mafeni. Kuti udzivise chero mhando rematambudziko emukati (hapana akawanda kudaro akazvipira kune percussion) Vaimbi veOSDBC vanoshanda vasingazivikanwe, vachivanza kuzivikanwa kwavo neheti uye magirazi ezuva mumavhidhiyo avo ekuita, uye vazhinji vanoshandisawo mazita ekunyepedzera mukati meboka. Ivo vangangove vasina kunyatsoita nzira pasina kuda kwenhengo kunyepedzera kunge vasingazive kana ivo vachienderana neyakanakisa shamwari yakasiya nemusikana.
Zvakadaro, izvo zvinodikanwa zvekusazivikanwa zvinokwidza nhandare yekutamba pakati pevaimbi vane huwandu hwakasiyana hwehunyanzvi, inokurudzira kubatana, uye zvinoita kuti zvive nyore kukumbira rubatsiro pasina kutya kunyadziswa kana kutonga.
Iyo purojekiti inoronga kuenderera kumberi kana denda rapfuura uye ichiri kutsvaga vaimbi, vanyori, varongi, mainjiniya enjiniya uye nezvimwe zvinoenderana nehunyanzvi.
Iwe wakanaka pane zvendarira kana zviridzwa zvenguva? Iwe uri muimbi wemimhanzi yezvikwata here? Iwe wakanaka pakugadzira odhiyo? Izvo hazvina basa kana usiri nyanzvi. Tarisa uone bio yevatungamiriri veiyo projekiti. Hapana munhu ari muimbi ane hunyanzvi, kune vadzidzi uye vakapedza kudzidza kukoreji kune avo mimhanzi chitandadzo. Muchokwadi, kune mumwechete achiri kuedza kupinda muchikwata.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve iyo projekiti kana kunzwa kuti vanotamba sei, shanya peji ino yewebhu
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Vateveri vePercussion vanogadzira yakavhurwa sosi chirongwa